Ukuhlawula akusona isisombululo kwabadlwenguliwe
IZINSIZWA zaseMbumbulu zibhikla ingoma ngoMgqibelo emcimbini wokugujwa kwe-International Mens Day, noMbishobhi Vusi Dube, uvukwe usinga wazijoyina Isithombe: NQOBILE MBONAMBI /AFRICAN NEWS AGENCY (ANA)
UKUKHOKHWA kwenhlawulo akubelaphi ubuhlungu kumgilwa osuke edlwenguliwe.
Lokhu kushiwo nguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uNkk Nonhlanhla Khoza, ngoMgqibelo ngesikhathi kugujwa usuku lwamadoda i-International Men's Day, eMbumbulu.
UNkk Khoza uthe bakhethe ukuvakashela kule ndawo ngoba bafuna ukuzohlangana nabaholi bendabuko kukhulunywe ngokuthi kubalulekile ukuthi udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kube wudaba lwamaphoyisa.
"Ezindaweni zasemakhaya kunezinhlawulo nezinye izinto ezikhokhwayo, sithi uma umuntu edlwenguliwe kumele icala liye amaphoyiseni kungabi wudaba oludingidwa ezinduneni ngoba kuyicala elidinga ukuthi likhulunywe emaphoyiseni," kusho uNkk Khoza.
Uthe KwaZulu-Natal kunamantombazane asemancane angu-21 650 athole izingane phakathi kukaJuni noNovemba.
“Esifisa ukukwazi ukuthi ngobani oyise bezingane ezizalwa yila mantombazane, ngabe ontanga noma abantu abadala. Esikwaziyo ukuthi izingane zamantombazane zivamise ukuhlukunyezwa ngabantu abaseduze ezibethembayo. Uma sibheka izibalo zamantombazane amancane atheleleka ngeHIV sithola ukuthi amantombazane amancane uma eqhathaniswa nabafana alingana nawo, u35% wamantombazane aneminyaka ephakathi kuka 9 no10 atheleleka ngalesi sifo kanti bafana u9% otheleleka ngalesi sifo ngonyaka. Lokhu kusitshela ukuthi kumele izinhlelo zethu zingagxili emantombazaneni kuphele kumele sikhulume namadoda ngoba kuyacaca lamantombazane aya ocansini nabantu abadala kunawo,” kusho uNkk Khoza.
UNGQONGQOSHE woMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi, uNkk Nonhlanhla Khoza noNdunankulu wakulesi sifundazwe uMnuz Sihle Zikalala ngoMgqibelo ngesikhathi kugujwa i-International Men’s Day, eMbumbulu Isithombe: NQOBILE MBONAMBI /AFRICAN NEWS AGENCY (ANA)
Uthe nakuba zikhona izinto ezimbi ezenziwa ngamadoda kodwa kumele bashayelwe ihlombe obaba abakhulisa izingane zamantombazane ngabodwa.
UNdunankulu wakulesi sifundazwe uMnuz Sihle Zikalala, uthe kumele kungathiwa uma kucatshwangwa indoda kucatshwangwe ngomuntu onolaka, olwayo, onamagqubu nonodlame.
" Asiyeke ukuthi silokhu sithi indoda ayikhali ngoba lokho kukhuthaza ukuthi indoda uma inezinkinga igqumelane ngaphakathi, ingakhali. Amabutho akakhulise abafana abancane abafundise ngamasiko nangezifo ezifana neHIV. Amadoda ahlukumezayo kumele akhishwe inyumbazane emiphakathini," kusho uZikalala.
UMnuz Gobizizwe Makhanya osusihlalo woBunye beMbumbulu nomdidiyeli wesizwe saKwaMakhanya, uthe akhona amacala athethwa ezinduneni athinta ukuhlukumezana kwabesilisa nabesifazane kodwa kuya ngesisindo secala uma kuyicala elinzima kuye kubizwe amaphoyisa.
’Kuzolamba abantu uma kuvalwa izwe’